Intlanganiso yeKhomishini ye-UNWTO yaseYurophu ibandakanya ilungu leBhodi ye-WTN u-Aleksandra Gardasevic-Slavuljica omele iMontenegro
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika
Ehlabathini jikelele | Ezizimeleyo | Ngexesha elifanelekileyo
Ikhaya » Iindaba ZikaRhulumente noRhulumente » Intlanganiso yeKhomishini ye-UNWTO yaseYurophu ibandakanya ilungu leBhodi ye-WTN u-Aleksandra Gardasevic-Slavuljica omele iMontenegro
Iingcebiso zeendaba | Iingxelo zeendaba
Ikhalenda yeNdawo eyiyo kunye neQabane
Cofa ukuze ufumane iminyhadala ezayo
Njengesitishi sethu se-YOUTUBE
Ijelo le-eTN Vimeo
eTN Spotify iPodcast
Xhasa abaxhasi bethu
kwiiveki 1 ezidlulileyo
Ikhomishini yengingqi ye-UNWTO iyigqibile intlanganiso yayo eAthene. Ilungu lebhodi yezoKhenketho yeHlabathi emelwe iMontenegro ivakalise ukubaluleka kommandla weBalkan kushishino lokuhamba nokhenketho lwehlabathi.
Shicilela 🖨 PDF 📄 eBook ook
Amalungu aseYurophu oMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) adibene e-Athene kwintlanganiso ye-66 yeKhomishini ye-Europ.e
Inkulumbuso yase-Greek u-Kriakos Mitsotakis kunye no-Sekela Mongameli we-European Commission u-Margaritis Schinas bebekhona.
ISaudi Arabia yamenywa yiGrisi ukuba iye kwintlanganiso yaseYurophu isandula ukuvula iziko lommandla wobukumkani baseSaudi.
UAleksandra Gardasevic-Slavuljica, uSihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) Iqela leNzala yaseBalkan, liye kwintlanganiso ye-UNWTO emele iMontenegro.
IKhomishini ye-UNWTO yaseYurophu yadibana ngokuchasene nomqolo we idatha yakutshanje ye-UNWTO kunye nemibono kukhenketho lwamanye amazwe kwaye kwimeko yokuqhubeka kweminxeba ye- ulungelelwaniso lokuqalisa ngokutsha ukhenketho ukuxhasa kungekuphela icandelo kodwa kunye nokubuyiselwa ngokubanzi kwezoqoqosho nakwezentlalo.
"IYurophu inethuba lokukhokela ukuqala kabusha kwezokhenketho kwihlabathi, ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo," utshilo uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili. "Inkxaso yezopolitiko esiyibonayo namhlanje bubungqina bokubaluleka kokhenketho ngaphaya kwecandelo lethu, kwakha ukuthembana kwaye kwenza ukuba intlalo noqoqosho luhambe kwakhona," wongeze watsho.
Oku kungqinwe yi-Nkulumbuso u-Kriakos Mitsotakis, othe wancoma ubunkokheli be-UNWTO kwaye waqinisekisa ukuzibophelela kwelizwe lakhe ekujongeni izixhobo zoncedo ukuqala ngokutsha ukhenketho oluzinzileyo. IKhomishini ijolise kumanyathelo asebenzayo athatyathwa yi-UNWTO ukukhokela ukuqala kwakhona kokhenketho kunye nokuxhasa izigidi zemisebenzi kunye namashishini kulo lonke elaseYurophu axhomekeke kwicandelo. Oku kubandakanya ukomelezwa intsebenziswano phakathi kwe-UNWTO kunye ne-European Bank yoKwakha ngokutsha noPhuhliso. Njengoko kucacisiwe entlanganisweni, la maziko mabini azakusebenzisana ekunikezeleni ngoncedo lobuchwephesha olwenzelwe ukuqhuba ukubuyisela uqoqosho kumazwe aliqela aseYurophu, kubandakanya iGrisi, kunye neCroatia, iMontenegro, iGeorgia, iTukey, kunye neTurkmenistan.
Ukubaluleka kwezokhenketho kwindlela yokuphila yaseYurophu kwaqwalaselwa ngakumbi nguSekela Mongameli weKhomishini yaseYurophu. UMargaritis Schinas, obekhe wathatha inxaxheba kwii-UNWTO's IKomiti yeNgxaki yezoKhenketho kwiHlabathi liphela, emele iKhomishini yaseYurophu, njengoorhulumente kunye neenkokheli zikarhulumente nezabucala zisebenza ngokudibeneyo ukusombulula iimpembelelo zobhubhane kwezokhenketho nokucwangcisa ukuqala ngokutsha okulungelelanisiweyo kwecandelo.
Ukusingatha nokuchophela iKhomishini, Umphathiswa Wezokhenketho eGrisi, uHarry Theoharis, ugxininise Ukuqina kwenkxaso yelizwe kunye nezopolitiko kwi-UNWTO kunye nokhenketho lwehlabathi ukususela ekuqaleni kwengxaki. IGrisi, yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwezokhenketho kwihlabathi, ibililungu elisebenzayo leKomiti yeNgxaki yezoKhenketho yeHlabathi ye-UNWTO ukusukela ekuqaleni kobhubhane. NjengoSihlalo weQela lobuGcisa, uMphathiswa u-Theoharis ukhokele iinkokheli zecandelo likarhulumente nelabucala ekwenzeni izisombululo ezibonakalayo kwimiceli mngeni emikhulu ejongene nezokhenketho, kubandakanya neenkqubo ezilungelelanisiweyo zokuqalisa ngokutsha okukhuselekileyo kwecandelo, hayi eYurophu kuphela kodwa kwihlabathi liphela.
Ngaphantsi kobunkokheli boMphathiswa, iSebe lezoKhenketho laseGrisi labhengeza ukusekwa kweziko lokuqala elizinikele ekulinganiseni uphuhliso oluzinzileyo lokhenketho lwaselwandle nolwandle kwi-Mpuma yeMeditera, ngentsebenziswano ne-UNWTO. Iziko lophando kunye nokubeka esweni liza kusekelwa kwiDyunivesithi yaseAegean kwaye iya kuthi ifake kwaye ihlalutye idatha enxulumene nokusingqongileyo, uqoqosho kunye nefuthe kwezokhenketho.
Intlanganiso iqukunjelwe ngonyulo kunye nokutyunjwa kwabantu kwizikhundla kumaqumrhu aliqela e-UNWTO. Amazwe amahlanu atyunjiwe ukuba amele iYurophu kwi-UNWTO Executive Council (eArmenia, eCroatia, eGeorgia, eGrisi naseRussia). Ngapha koko, iHungary neUzbekistan zonyulwa njengabagqatswa kwindima yeSekela Mongameli kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo, kwaye iAzerbaijan neMalta zonyulwa ukuba zisebenze njengamalungu eKomiti yeCredentials. Ekugqibeleni, iGrisi yonyulwa ukuba isebenze njengoSihlalo weKhomishini ye-UNWTO yaseYurophu, iBulgaria neHungary zonyulwa kwizikhundla zayo ezibini. Amalungu anyule iArmenia ukuba ibambe intlanganiso elandelayo yeKhomishini ye-UNWTO yaseYurophu.
Amagosa aseBangkok anqwenela ukuba ne-COVID-19
I-Kazakhstan yenza iiveki ezimbini zokuvalelwa zodwa kubo bonke abasuka e-India
Ezokhenketho azizukubuyela umva- UNWTO, WHO, i-EU ayiphumelelanga, kodwa…
Matshi 27, 2021
I-UNICEF, abantu abadumileyo babongoza amazwe e-G7 ukuba anike iyeza lokugonya le-COVID ngoku
iiyure 15 eyadlulayo
Iindaba zokuhamba eSerbia
Abantu baseSerbia baneentliziyo ezinkulu ngexesha le-COVID ebonisa uMbono woKhenketho kunye naMandla
iiyure 14 eyadlulayo
Iindaba zeenqwelo moya
I-WestJet: Iinqwelomoya ezininzi ezisuka eCanada ziye eHawaii kobu busika
Iindaba zeBhodi yoKhenketho yaseAfrika
Ubudlelwane obukhethekileyo phakathi kweBhodi yoKhenketho yase-Afrika kunye ne-Kingdom yase-Eswatini
Umfazi wase-Thailand usweleke kwiiyure ezimbalwa emva kogonyo lwe-COVID-19
iiyure 20 eyadlulayo
Iindaba ZikaRhulumente noRhulumente
Ukuhamba kwe-US kunye ne-UK ukuvula ipaseji yokuhamba
Iindaba zaseBelize zokuhamba
IBelize ilungiselela ukwamkela uhambo lweCarnival Vista
iiyure 18 eyadlulayo
Iindaba zoMsebenzi woHamba
Abagibeli ababini baseRoyal Caribbean bavavanya i-COVID-19 kuhambo lokugonya ngokupheleleyo
iiyure 22 eyadlulayo
Iinkonzo zeendaba zeWire
I-ketone Bodies Semaglutide Ukuhla kwesisindo: Iindleko, ukuvunywa kwe-FDA kunye nokuthenga phi?
Iindaba Zokuhamba e-USA
Ilungelo lokushicilela @Travel News Group